DF Soomaaliya oo lagu eedeeyey in Lacag ay ku bixisay doorashadii Koonfur Galbeed & Warbixin xasaasi ah oo laga gudbiyey.
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in ay lacag badan ku bixisay arrimaha ku saabsan doorashooyinkii dawlad gobaleedyada qaarkood, gaar ahaana waxaa lasoo qaaday oo la xaqiijiyey Koonfur Galbeed, waxaana si adag loogu eedeeyey dawladdu in ay dhaqaalahaas u adeegsatay soo saarida musharax u gaar ah.
Warbixin ka kooban 161 bog oo loo gudbiyey Jamciyada Qaruumaha ka dhaxaysa ayaa aad looga hadlay arrimaha ku wajahan musuqmaasuqa, faragalinta iyo talaabooyin ay sameysay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Guddigu, waxay hoosta ka xariiqeen in ay jirto dhibaato weyn oo ah daganaansho la’aan siyaasaded tas oo ay sheegtay in ay hormuud u tahay dawladda Faderaalka, waxayna sheegeen in la diiday in la baaro dhacdooyinka qaarkood.
HALKAAN KA AKHRISO WARBIXINTA GOLAHA